YouTube kwiPC yam? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
YouTube kwiPC yam?
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 278
YouTube Ibe sesinye sezixhobo ezisetyenzisiweyo kwiintsuku zethu kwaye iqonga lasuka ekubeni nababhalisi abambalwa ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX, ukwaphula zonke iirekhodi kwiminyaka elishumi yokuqala efanayo.
Ikhasi lewebhu Ayisetyenziswanga kuphela ngabo bafuna ukubukela ividiyo yokuzonwabisa okanye abafuna ukumamela umculo. Ukusetyenziswa kwayo kuhamba phambili, kuba ezinye iinkampani zisebenzisa izixhobo zazo zokumamela ukuxhasa iiprojekthi zazo.
Ngokufanayo inethiwekhi yokuncokola, uye waba ngumthombo wolwazi kwihlabathi liphela, kuba ngalo unokulandela ukusasazwa kweendaba, ezopolitiko, ezemidlalo kunye neziganeko zomdla ngokubanzi.
IiVidiyo ezinokufikelela kwikhonkco
Kulula kakhulu ukufumana naluphi na uhlobo lwevidiyo; umculo, ulwazi, ezopolitiko, ezemidlalo, uhlobo lwepodcast, ukonwabisa; inyani akukho mida, yonke into ekuyo YouTube Uyabona, ungayifumana ngokukopa nje ikhonkco.
Zonke iividiyo onokucinga ukuba zigcinwe kwi-PC yakho, zivakala zilungile, akunjalo? Ewe, kutheni ungayenzi? Kukho iindlela ezahlukeneyo zokufumana le nto kwaye uninzi lwazo lusimahla kwaye nangona ngendlela ethile kungekho semthethweni, uninzi lwezinto esiqhele ukuzenza kwiwebhu, nazo.
Isoftware okanye iwebhusayithi
Esi sigqibo sesomntu kuphela kwaye senzelwe umsebenzisi kunye nendlela abaziva bekhululeke ngakumbi okanye bekhuselekile, njengoko kukho amaphepha abekelwe ukunyanzela nokukhuphela imathiriyeli kuyo YouTubeNgelixa kukho isoftware yasimahla eyenza ngokufanayo.
Uncedo lwesoftware kukuba kuninzi lwabo unokuhlela ividiyo kwaye usike ezinye zevidiyo esizibonileyo kwinethiwekhi yoluntu, kodwa ikhethwe ikakhulu kuba iqinisekisa, kwiimeko ezininzi, ukhuseleko lwekhompyuter yakho.
Ngokukhuphela kuyo nayiphi na webhsayithi, ikhompyuter yethu ichanekile kuso nasiphi na isoyikiso sewebhu, ke kuyacetyiswa ukuba ugcine i-antivirus efanelekileyo esebenzayo enoxanduva lokukhusela i-PC yethu kuyo nayiphi na intsholongwane, njengoko ezi zifihliwe kwintengiso zolu hlobo lwamaphepha okhuphelo.
Izinto ekufuneka uzigcine engqondweni:
Unako khuphela iividiyo ezininzi kangangoko ufuna kwi-PC yakho, okoko isoftware okanye iphepha livumela.
Kuya kufuneka uyazi izoyikiso ezinokuchaphazela iPC yakho.
Ezinye iividiyo, Kuxhomekeka kwiindlela ezikhutshelwa ngayo, zinokuvunwa okanye zijongwe kumgangatho osezantsi kakhulu kunokoqobo.
Ixesha lokukhupha iya kuxhomekeka kubungakanani bevidiyo kwaye ayinakutshintshwa nangayiphi na indlela.
Eyona nto ilungileyo kwiPC yakho yile khuphela ividiyo ibe nye ngexesha, nangona kungekho mida yokukhuphela.
Kuya kufuneka ukhethe, ukuba unokhetho, ifomathi oyifunayo Khuphela ividiyo yakho, kuba kwiimeko ezininzi ayizenzekeli ngokuzenzekelayo i-mp4 kwaye ukuba awukhethi eyiyo, isenokungadlali kamva.
Kufuneka ube isidlali sevidiyo chord kwikhompyuter yakho kwaye ukuba awunayo, unokukhuphela isoftware yayo, simahla kwaye iluncedo kakhulu.
1 IiVidiyo ezinokufikelela kwikhonkco
2 Isoftware okanye iwebhusayithi
3 Izinto ekufuneka uzigcine engqondweni:
Iividiyo kunye nokunye Ukukhuphela?